Banijya News | सरकारले संसदबाटै बजेट ल्याउँछ कि अध्यादेशबाट ? - Banijya News सरकारले संसदबाटै बजेट ल्याउँछ कि अध्यादेशबाट ? - Banijya News
सरकारले संसदबाटै बजेट ल्याउँछ कि अध्यादेशबाट ?
बजेट आउन १० दिन मात्रै बाँकी हुँदा पनि सरकारले अझै बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको छैन । संविधानमा जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
संसद चालू रहेको अवस्थामा सरकारले संसदबाटै बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर अल्पमतको सरकारले ल्याउने बजेट पारित हुने सम्भावना कम छ । बजेट पारित हुनको लागि संसदमा बहुमत चाहिन्छ । तर अहिले सरकारसँग १२१ सांसद मात्र छन् ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाको अध्यक्ष महन्त ठाकुर नेतृत्वको समूहलाई साथ लिएर पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद समाधान गरी बजेटअघि नै विश्वासको मत लिएर बजेट ल्याउने तयारी गरे पनि जसपाको निर्णयको कारण पछि हटेको बताइएको छ ।
नेकपा एमालेका नेता सुभाष नेम्वाङले सरकारले प्रि–बजेट ल्याउन चाहे पनि संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिँदा प्रभावित भएको बताए । उनी भन्छन्, ‘बजेट त जेठ १५ गते संसदबाटै आउँछ । संविधानअनुसार त बजेट आइहाल्छ नि !’
बजेट अधिवेशन बोलाउनेबारे प्रधानमन्त्री ओलीले गृहकार्य गरिरहेका बताउँदै उनले यसबारे छिट्टै निर्णय आउने बताए ।